Myanmar Defence Weapons: HQ-9/FT-2000 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံးပျံစနစ်များ
HQ-9/FT-2000 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံးပျံစနစ်များ
HQ-9 ဒုံးပျံစနစ်ဟာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထုတ် တစ်ခုတည်းသော တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံကာကွယ်ရေး နှင့် ရေဒါပျောက် လေယာဉ်များကို ချေမှုန်းနိုင်သော ဒုံးပျံစနစ်ပါ။ ဒါ့အပြင် အီလက်ထောနစ်နှောက်ယှက်မှု များဖြင့် မတားဆီးနိုင်သော Antjamming & antiradiation စနစ်များအပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်ရေဒါလမ်းညွန် စနစ်ပါဝင်သော ဒုံးပျံများ ဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တူရကီနိုင်ငံက နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး စက်ရုံများထံမှ စနစ်၁၂ခုထိ နည်းပညာပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးခဲ့သော စနစ်လဲဖြစ်ပါတယ်။
HQ-9 သို့မဟုတ် မီးလျံနီ လို့ နာမည်တွင်တဲ့ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စနစ်များကို ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ S-300 အမေရိကန်ရဲ့ MIM-104 Patriot တို့ကို လေ့လာကာ ၁၉၉၀ပြည့်လွန်တွင် CPMIEC ကုမ္မနီမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ပြည့်လွန် နှစ်များဆီက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟာ ရုရှားနိုင်ငံမှ S-300P နှင့် S-300V အမျိုးအစားများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ စနစ်များတွင် တွဲဖက်ကာ ပြည်တွင်းဖြစ် ဒုံးပျံများအသုံးပြုနိုင်ရေး စတင်ကြိုးပမ်းရာမှ ကိုယ်ပိုင် စနစ်တစ်ခု ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
305A and B
HQ-9 စနစ်တစ်ခုမှာ ဒုံးကျည်၎လုံးစီ ပါဝင်သော TAS5380 ရွေ့လျားဒုံးပစ်စင် ၈ခုပါဝင်ပြီး (နောက်ပိုင်းမှာ ၁၂ခုမှသည် အခု၂၀ထိ တွဲဖက်နိုင်သည်) TWS-312 အမိန့်ပေးယာဉ်ဖြင့် ကြားခံတွဲဖက်ထားသော 305A AESA ထောက်လှမ်းရေး ရေဒါနှင့် 305B ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါများတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အနိမ့်ပျံထောက်လှမ်းရေး ရေဒါ Type120 ကိုလဲ တွဲဖက် တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒုံးပျံများကတော့ S-300P ဒုံးပျံများနှင့် မတူပဲ အကြမ်းခံနိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်သော S-300V ဒုံးပျံစနစ်များကဲ့သို့ ၂ဆင့်သုံး ဒုံးပျံအင်ဂျင်စနစ်များပါဝင်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်မှာ ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါလမ်းညွှန်မှုဖြင့် ပစ်မှတ်အနီးကို ချဉ်းကပ်မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ဒုံးကျည်မှာပါဝင်တဲ့ ရေဒါစနစ် (သို့) ရေဒီယိုလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ အသံထက် ၄ဆအမြန်နုန်းနဲ့ ပစ်ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကွာအဝေး ၂၀၀ကီလိုမီတာထိ ပစ်ခတ်နိုင်ပြီး အမြင့် ၅၀၀မီတာမှ မီတာ၃သောင်းထိ ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ၅၀၀မီတာထက် နိမ့်တဲ့ ပစ်မှတ်များအတွက်တော့ Type120 ရေဒါလိုအပ်ပြီး အဲသည်နေရာမှာတော့ HQ-9 ဟာ အင်မတန်အားနည်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ် ပြည်ပကို ထုတ်ရောင်းဖို့ FT-2000 အဖြစ် ပွဲထုတ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဆွဲဆောင်ချက် ၄ချက် ဖြင့် ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမ တစ်ခုကတော့ တရုတ် ပစ္စည်းများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကုန်ကျစားရိတ် သက်သာပြီး ဘာမှ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမရှိပဲ အသုံးပြုရ လွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒုံးကျည်များဖြစ်ပြီး ရုရှားလုပ် ဒုံးပျံများထက် လေးလံပေမယ့် ထိမှန်နိုင်ချေကတော့ ၇၀% ကျော်ရှိတယ်လို့ အာမခံပေးထားပါတယ်။ ဝယ်သူရဲ့ စိတ်ကြိုက်ကို လိုက်လို့ အသေးငယ်ဆုံးအဖြစ် ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါ(သို့) ထောက်လှမ်းရေး ရေဒါတစ်ခုနဲ့အတူ ဒုံးပစ်စင် ၆ခု(သို့)၈ခု(သို့) ၁၂ကို ဝယ်ယူပြီးလျင် အသုံးပြုနိုင်တော့တာ ပါပဲ။
ဒုတိယအချက်ကတော့ အသံထက် ၄ဆမြန်တာမို့ ကြားဖြတ်ဟန့်တားဖို့ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်နုန်းမြင့် ဒုံးပျံများအတွက် S-300V စနစ်များမှာသာပါဝင်ပြီး စာချုပ်များစွာဖြင့် ထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TVM (Track-via-missile) ခေါ် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ပစ်မှတ်ဆီရောက်အောင် ရေဒါလမ်းညွှန်နည်း၊ ဒုံးကျည်ပါ ရေဒါစနစ်နည်း၊ ရေဒီယို ဒါမှမဟုတ် တီဗွီစနစ်သုံး လမ်းညွှန်နည်းတို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတဲ့ စနစ်ကို ဈေးနုန်းချိုသာစွာနဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ မည်သည့် ရေဒါစနစ်နဲ့မဆို တွဲဖက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုံးကျည် တစ်စင်းချင်းဆီမှာ သီးခြား ရေဒါပါရှိတာကြောင့် သာမာန် လေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေး ရေဒါစနစ်နဲ့ပင် တွဲဖက်လို့ ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် HQ-9 အတွက် သီးခြား ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါ မဝယ်လိုသူတွေ အဖို့ အခြားရှိပြီးသား မည်သည့် ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါနဲ့မဆို တွဲဖက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စတုထ္ထအချက်ကတော့ S-300PMU-2 မှာသာပါဝင်တဲ့ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသော လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်များ၊ တိုက်လေယာဉ်များ၊ လေကြောင်းထိမ်း ရေဒါများသာမက ဒုံးပျံများအချင်းချင်းပါ အချက်အလက် ချိတ်ဆက်နိုင်တာဖြစ်ပြီး မတူညီတဲ့ လမ်းကြောင်း ၂ခုကနေ တပြိုင်နက် တိုက်ခိုက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်အနေနဲ့ အပြည့်အစုံမပါဝင်တဲ့ စနစ်များဟာ ရန်သူမိမိ ခွဲခြားနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ မီတာ ၅၀၀အောက် အနိမ့်ပျံ ရဟတ်ယာဉ်များနဲ့ ခရုစ်ကဲ့သို့ ဒုံးပျံများကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားရန် အားနည်းချက်များ ရှိသော်လည်းပဲ ခုလို အချက်အလက် ချိတ်ဆက်ပြီး အခြားသော တာတို တာလတ် စနစ်များနဲ့ တွဲဖက်နိုင်တာမို့ ကာမိဟန်ရှိပါတယ်။
ဒုံးပျံကာကွယ်ရေးနဲ့ ရေဒါဖိဖျက်နဲ့ ရေဒါပျောက် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးအတွက် YLC-2 လို့ အသိများကြတဲ့ 305A နဲ့ 305B အမျိုးအစား AESA ရေဒါများကို အသုံးပြုပါတယ်။ အကွာအဝေး ၃၀၀ကီလိုမီတာကျော်အထိ ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပြီး ကီလိုမီတာ ၁၂၀နဲ့ ၂၀၀ကြားမှာတော့ ရေဒါပျောက် စနစ်သုံးအားလုံးနဲ့ ပစ်မှတ်အငယ်များကို ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း B-2 ကဲ့သို့ လေယာဉ်ပျံများနဲ့ အမြင့်ပျံမောင်းသူမဲ့ ထောက်လှမ်းရေးရေဒါများ၊ ခေတ်မီစနစ်သုံး ရေဒါရှောင်စနစ်များကိုတော့ YLC-20 လို Passive sensor သုံးရေဒါများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ YLC-20 ဟာ HQ-9 ရဲ့ ပြည်ပပို့စနစ် FD-2000 ရဲ့ တွဲဖက်ရန် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေဒါစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ FT-2000 မှာတော့ YLC-2 ရေဒါများ တပ်ဆင်ပါတယ်။
ပစ်ခတ်မှု ထိမ်းချုပ်ရေး ရေဒါများအနေနဲ့ HT-233 ရေဒါကို အသုံးပြုထားပြီး ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ပတ်လည်အတွင်းမှာ ပစ်မှတ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော် ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ပစ်မှတ် ၅၀လောက်ကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်နိုင်ပြီး ၃၀ကျော် တပြိုင်တည်း ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါတစ်ခုချင်းဆီမှာ တွဲဖက်ထားမယ့် ဒုံးကျည် ၄လုံးပါ ပစ်စင် ၃ခု(သို့)၄ခု အတွက်ကိုတော့ HQ-12 စနစ်မှာ သုံးတဲ့ H-200 (သို့) SJ-200/212 /231 ရေဒါများ ဒါမှမဟုတ် S-300 မှာသုံးတဲ့ 30N6 ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။ အဲဒီရေဒါများဟာ ကီလိုမီတာ ၁၂၀အတွင်းမှာ ပစ်မှတ် ၆ခုမှ ၁၂ခုထိ တပြိုင်တည်း ပစ်ခတ်နိုင်တာမို့ လုံလောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ HQ-9 ရဲ့ စနစ်ဟာ ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါ HT-233 တစ်ခုကို ရှာဖွေရေး ရေဒါအောက်မှာ တွဲဖက်ထားပြီး ဒုံးပစ်စင် ၄ခု တွဲဖက်ပါတယ်။ အခြားသော H-200 ကဲ့သို့ရေဒါများကိုတော့ ဒုံးပစ်စဉ် ၂ခု (သို့) ၃ခုဆီဖြင့် တွဲဖက်ကာ ပစ်စင်၂၀လောက်ထိ တွဲဖက် ပစ်ခတ်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် HT-233 တစ်ခုနဲ့ ဒုံးပစ်စင် ၄ခုပါစနစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အခြား ရေဒါစနစ်များ ၂ခု အသုံးပြုတဲ့ ဒုံးပစ်စင် ၆ခုပါ စနစ်၊ ဒါမှမဟုတ် Ht-233 တစ်ခု အခြား ရေဒါစနစ်များ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတဲ့ ဒုံးပစ်စင် ၈ခုပါဝင်တဲ့ စနစ် စသည်ဖြင့် ဝယ်သူစိတ်ကြိုက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Type-120 အနိမ့်ပျံ ထောက်လှမ်းရေး ရေဒါစနစ်ကိုပါ တွဲဖက်ထားပြီးရင်တော့ အနိမ့်ပျံ ပစ်မှတ်များကို ပစ်ခတ်နိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် လျင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားသော ခရုစ်ဒုံးပျံများနဲ့ သေးငယ်သော မောင်းသူမဲ့များ ရဟတ်ယာဉ်များကို ပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ကတော့ အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းနဲ့ ဈေးနုန်းချိုသာခြင်း ခေတ်မီစနစ်သစ်များ ပါရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအများက စိတ်ဝင်တစားရှိသော လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ ။
Posted by Mg Han at 8:46 AM
Falcon August 25, 2014 at 3:31 AM
"အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများ အရ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လည်း အဆိုပါ လေကာ လက်နက်စနစ်အား ယူနစ် ၃ ခု နှင့် အထက် ပိုင်ဆိုင်ထား ကြောင်းသိရ ဘာညာ " မပြောတော့ ဘူး လား ဗျာ....။ အဟဲနောက်တာ နော....
ဥုံ ဖွ.... ဒီထက်သာ တဲ့ S300 တို့ S400 တို့ရောက်စေ ... ရှိစေ ဗျာ....
အစ္စရေးက သံကွန်ချာ လို မျိုး တီထွင်ကြပါလား ဗျာ...။ နော.... ကိုယ်ပိုင် ဒုံး ကျည် ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်း ပညာ လို တယ်.. ဗျ..။
sithu August 25, 2014 at 3:42 AM
ကိုmm ရေ့ မြန်မာကကိုယ်ပိုင်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ထုပ်လုပ်နိုင်ပြီးလားသိချင်ပါတယ်။ဖော်ပြပေးပါလား။
sithukyaw rakhine August 28, 2014 at 11:23 PM
aunglin htut September 18, 2014 at 10:22 AM
ရောက်နေပြီဆို အတော်များတယ်ပြောတယ် HQ-9 မှာအားသာချက်တွေရှိတာဘဲသူလဲကောင်းပါတယ်
John H Win October 12, 2014 at 1:35 AM
If HQ-9 and its derivatives or modified versions are reliable and effective, why China seriously imported S-400/SA-21 Growler from Russia?
Do they merely want to steal the technology?
John H Win October 13, 2014 at 4:45 AM
I think I need to express some more clarification.
No need to impress Turkey just asamember of NATO.
Every nation chooses its relevant military technology and weapon system in accordance with its strategic needs.
As far as I understand, Turks has many reason including very nuance political factors to induct HQ-9/FD-2000 even U.S seriously object Turkish plan and US offer their Patriot probably PAC-3 system.
First of all, they want technology and technical know-how of system design and industrial capability of long range SAM system, not merely wantaweapon system. They can get suchaprospect of locally producing facilities under license with full TOT (Transfer of Technology) from only China by cooperating. U.S will provide complete set of Ratheon’s product with intensive training, spare parts; that is all. Previously Russia offered Turks to sell S-300 PMU-2 Favorit system, but no way to get license production right from Russia. Russie will never give their top secret partially anti-stealth sensors and missile technology to Turks.
You all boys need to understand that Turkish procured HQ-9 (FD-2000) doesn’t mean that Chinese stolen design S-300 clone HQ-9 is the most reliable and militarily effective system.
Very complicated and nuance political factors, psychological factor, military strategy, historical dissent, changing nature of Turkish internal and external policy, regional rivalry, Turkish historical and current relation with some countries in the region in deciding HQ-9 procurement are too much subtle to say here. If I say here in detail, it would take several pages.
I should say here is only one thing, Burma should not procure HQ-9 and its derivative series. Politically, Burma should not seriously rely on China in advanced sophisticated weapon system and strategically sensitive needs of our nation, militarily it is unreliable.
Burma’s current policy of ultra reliance upon China is so much disgusting for Burmese people.
hla min October 15, 2014 at 2:31 PM
It looks just likeatoy forachild.
i want to uploadaTitle concern weapons
ရေယာဉ်တင် တာတိုပစ် ဒုံးပျံများ
HQ-9/FT-2000 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံးပျံစနစ်များ...
S-300 P အမျိုးစား လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဒုံးပျံမျ...